बढ्यो कर्मचारीको तलब (हेर्नुस् कसको कति)::Nepalese News Portal
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीहरुको तलब ३ वर्षपछि बढेको हो ।
बुधबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेश गर्दै डा. अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीहरुको तलब बढाएको जानकारी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सुरुको तलब स्केलमा राजपत्रांकितको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकितको २० प्रतिशतले तलब बढाएको जानकारी दिए ।
राजपत्रांकिततर्फ मुख्य सचिवको तलब स्केल १८ प्रतिशतले बढेर ६५ हजार १ सय ३६ पुगेको छ । त्यस्तै राप विशिष्टको ६० हजार ६ सय ७५, राप प्रथमको ४७ हजार ३ सय ७७, राप द्वितियको ४० हजार ३ सय ७९ र राप तृतीयको ३५ हजार ९ सय ९० पुगेको छ ।
त्यस्तै, राजपत्र अनंकिततर्फको २० प्रतिशतले वृद्धि भई नयाँ तलब स्केलअनुसार राप अंन प्रथमको २८ हजार २ सय, राप अनं द्वितियको २६ हजार ६ सय ०४, राप अनं तृतीयको २२ हजार ०८ र राप अनं चतुर्थको २० हजार ६ सय ७६ पुगेको छ ।
हलकाराको पाँचौ स्तरको २७ हजार ४ सय ५६, चतुर्थ स्तरको २४ हजार ७ सय ०८, तृतीय स्तरको २३ हजार २ सय ०८, द्वितिय स्तरको २१ हजार ८ सय २८, प्रथम स्तरको २० हजार ६ सय ७६ पुगेको छ । साथै हुलाकीहरुको पाँचौ स्तरको २६ हजार ८ सय ०८, चतुर्थ स्तरको २४ हजार ६०, तृतीय स्तरको २२ हजार २ सय २४, द्वितिय स्तरको २० हजार ८ सय ५६ र प्रथम स्तरको १९ हजार ८ सय ९६ पुगेको छ ।
त्यस्तै, हेभी सवारी चालक पाँचौ स्तरको ३४ हजार ४ सय १०, चतुर्थ स्तरको ३२ हजार ६ सय १६, तृतीय स्तरको ३० हजार ७ सय २०, द्वितिय स्तरको २६ हजार ९ सय ८८ र प्रथम स्तरको २३ हजार ८ सय ४४ पुगेको छ ।
हलुका सवारी चालकको पाँचौ स्तरको ३२ हजार ६ सय १६, चतुर्थ स्तरको ३० हजार ७ सय २०, तृतीय स्तरको २६ हजार ९ सय ८८, द्वितिय स्तरको २३ हजार ८ सय ४४ र प्रथम स्तरको २२ हजार ८ पुगेको छ ।
कार्यालय सहयोगीको पाँचौ स्तरको २६ हजार ५ सय ६८, चतुर्थ स्तरको २३ हजार ८ सय ४४, तृतीय स्तरको २२ हजार ८, द्वितिय स्तरको २० हजार ६ सय ७६ र प्रथम स्तरको १९ हजार ४ सय ७६ पुगेको छ ।